Wasiir dowlihii cadaalada, diinta iyo awqaafta Puntland oo iscasilay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWasiir dowlihii cadaalada, diinta iyo awqaafta Puntland oo iscasilay
Wasiir dowlihii cadaalada, diinta iyo awqaafta Puntland oo iscasilay
July 17, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Xabiib Saalax. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiir dowlihii cadaalada, diinta iyo awqaafta iyo dastuurka Puntland, Xabiib Saalax ayaa iscasilay maanta oo Arbaco ah.
Saalax ayaa qoraal uu soo dhiggay boggiista Twitter-ka ku sheegay in uu go’aan ku gaaray in uu xilkaas iska casilo kadib markii uu si taxadar leh uga fakaray, balse ma uusan sheegin sababta dhabta ah.
Waxa uu soo noqday wasiirka cadaalada, diinta iyo awqaafta ee maamulkii madaxweyne Cabdiweli.
Bishii Febaraayo, waxaa loo magacaabay wasiirka madaxtooyada, balse madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa horaantii bishaan u badalay wasiir dowlaha cadaalada, diinta iyo awqaafta iyo dastuurka.
Puntland’s minister of state for justice and religious affairs resigns
Puntland oo sheegtay in aysan jirin in lacag lagu kordhiyay ganacsatada isticmaasha dekada Boosaaso
Boosaaso-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegtay in aysan waxba ka jirin in wax qiimo ah lagu kordhiyay ganacsatada badeecada kala degta dekada Boosaaso. Shir saxaafadeed ay Boosaaso ku qabteen maanta oo Isniin ah wasiirka dekadaha Puntland [...]
Warmurtiyeed: Habraaca Hirgalinta Heshiiska Siyaasadeed ee Hagaya Doorashada 2020/2021 ee heer Federaal
Habraaca Hirgalinta Heshiiska Siyaasadeed ee Hagaya Doorashada 2020/2021 ee heer Federaal Guddiga Xallinta Khilaafaadka ee Doorashada dadban ee 2020/2 Muqdisho, 1 October 2020 Hannaanka Madaxabanaan ee Xallinta Khilaafaadka Doorashada 2020/2021 Mabaadi’da Guud ee Hannanka Xallinta [...]